Ngoku ungasebenzisa ikhadi lakho leBanco Mediolanum kwiApple Pay | IPhone iindaba
UNacho Aragonés | | Apple Pay
I-Apple Pay ngoku iyafumaneka ngamakhadi kwiibhanki ezingaphezu kwama-20 eSpain kwaye enye ngaphezu Ndalunyukiswa.
IBanco Mediolanum sele inayo iApple Pay kwaye ungayenza isebenze namhlanje.
Inkqubo yokuhlawula ikhadi kwezixhobo zethu zeApple, Apple Pay, Ibikunye nathi ukusukela nge-1 kaDisemba ngo-2016 apho iBanco Santander yayivula.
Ukusukela ngoko, Apple Pay ibikhula kwaye sele ineebhanki eziphambili zaseSpain, kunye nezinye iinkonzo ezininzi zezezimali.
Hoy ngoku ungasebenzisa ikhadi lakho leBanco Mediolanum. Khumbula ukuba ukongeza ikhadi kwi-Apple Pay kwi-iPhone yethu sinokuyenza ngeendlela ezahlukeneyo:
- Ukusuka kwi-app yeWallet, usebenzisa inkqubo esikhokelayo ngokunqakraza kwi icon + ekunene ngasentla.
- Ukusuka kuseto lwe-iPhone, kwi "Wallet nakwiApple Pay". Apho sinako "ukongeza ikhadi".
- Ukusuka kwii -apps zebhanki Sihlala sinonxibelelwano lokuvula amakhadi kwiApple Pay okanye ukusuka iwebhusayithi yakho.
Inkqubo ilula kakhulu. Ngenisa idatha (ngekhamera okanye ngesandla) kwaye uqinisekise ukwenziwa kwayo, ngesiqhelo ngokuvula usetyenziso lwebhanki okanye ngeSMS yokuqinisekisa.
Kwakhona, Ungayibukela ividiyo yeBanco Mediolanum ichaza indlela yokwenza ngokubonakalayo.
Ukongeza ikhadi kwi-Apple Watch yethu, kufuneka siye kwi-Watch app kwi-iPhone yethu. Kulapho, slayida kwi "Wallet kunye neApple Pay" kwaye ungeze ikhadi elitsha, ngendlela efanayo nale siyenzileyo kwi-iPhone.
Ayisiyiyo kuphela iBanco Medialanum esebenzayo namhlanje, ezinye iibhanki, ezinjenge-N26, zenziwe zasebenza nakwamanye amazwe. Kule meko, I-N26 ngoku iyafumaneka e-UK (kwaye eSpain ibisebenza ixesha elide).
E-Spain sinebhanki enye enkulu ukuba sibe nesibindi sokusebenzisa i-Apple Pay, i-ING, kwaye kubonakala ngathi iyakwenza njalo ekugqibeleni. Y, Nangona iqinisekisiwe, okwangoku asazi ukuba iApple Pay iza kufumaneka nini kwi-ING.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » Ngoku ungasebenzisa ikhadi lakho leBanco Mediolanum kwiApple Pay
Ukusuka kwi-iPhone 7 ukuya kwi-iPhone X kwiwebhusayithi ebuyiselweyo eSpain
I-Apple iqala ngokuthengisa iiadaptha ze-Ethernet ngeLighning